February 2019 - Page 2 of 4 - Puntland Mirror Believable Media Website
February 24, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in labo katirsan xagjiriinta Al-Shabaab ay ku dileen afar duqeymood oo ka dhacay gudaha Soomaaliya. Duqeymaha ayaa lagu burburshay bar-kantaroolo iyo meelo kale oo ay maleeshiyadu u adeegsan jirtay […]
Garowe-(Puntland Mirror) Somalia Federal Government is expecting to appoint a new director for Somali National Intelligence and Security Agency (NISA). Asad Osman Abdullahi, who ran for president in Puntland’s election in January 2019, is one […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa in ay magacowdo agaasimaha haayada NISA. Asad Cusmaan Cabdullaahi, kaasoo u tartamay madaxweynaha Puntland ee doorashadii dhacday bishii Janaayo 2019, ayaa kamid ah dadka ugu horeeya ee […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xildhibaan katirsan baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa gelinkii dambe ee Sabtida lagu dilay magaalada Muqdisho. Cusmaan Cilmi Boqore, oo lagu qiyaasayo 80-sanno jir kaasoo ahaa xildhibaanka ugu da’a weyn golaha baarlamaanka ayaa waxa […]
February 23, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa manta oo Sabti ah kormeeray ciidamada difaaca Puntland ee loo yaqaan Daraawiish oo ku sugan xerada 54-aad ee magaalada Garoowe. Isaga oo la hadlayay ciidamada, Deni […]
Bujumbura-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Burundi ayaa ku taageeray dowladda hanjabaada ku saabsan in ay la bixi doonaan dhammmaan ciidamadooda katirsan Howlgalka Midowga Afrika ee AIMSOM ee Soomaaliya. Midowga Afrika qorshahooda ku saabsan tartiib uga saarista ciidamada […]
February 20, 2019 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaan la kumi doonin hoggaamiyaha maamulka Somaliland, sida ilo-wareedyo xog ogaal ah oo katirsan dowladda Federaalka ay u xaqiijiyeen bog wareedka Puntland Mirror. Maalmihihii u dambeeyay warbaahinta Soomaaliya iyo […]
February 18, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Ninkii u dhashay dalka Malta kaasoo lagu dilay gudaha magaalada Boosaaso labo asbuuc kahor ayaa maanta lagu aasay dalkiisii. Paul Formosa waxaa toogtay oo dilay nin hubeysan oo katirsan Al-Shabaab 4-tii Febaraayo meel […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka Puntland ayaa manta oo Sabti ah meelmariyay golaha wasiiradda cusub oo uu dhawaan soo magacaabay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. 63 xildhibaan oo kulanka fadhiyay, ayaa ogolaaday in la meelmariyo golaha wasiiradda. […]